Uthembisa lukhulu umqeqeshi woSuthu ngo 2016 | News24
Uthembisa lukhulu umqeqeshi woSuthu ngo 2016
ISITHOMBE: gALLO IMAGES Umqeqeshi wamaZulu u Steve Barker uthembisa lukhulu kulo nyaka.
UMQEQESHI waMaZulu uSteve Barker uthi uzozama ngayoyonke indlela ukuvika izembe enyakeni omusha. Phela lo mqeqeshi ubekhuluma osukwini lokuqala lo nyaka omusha u2016 ngamapulani akhe.
UBarker uthi impilo inzima ehlathini, kwiNFD ngoba cishe wonke amaqembu alapha adlalela ukubuyela kwiPSL. “Akekho othanda ukudlala kwiNFD ngezizathu eziningi futhi noMzansi wonke uyazi. Kunzima lapha futhi akunikezwana ithuba lokuphefumula enkundleni. Phela nawe uvele uzibonele ukuthi wonke umuntu uphantela ukubuyela ezweni elinoju nobisi, kwiPSL,”kusho uBarker.
Lo mqeqeshi uthi into ahlale eyicabanga ubusuku nemini, ikakhulukazi njengoba unyaka uqala, ukuvika izembe ngayoyonke indlela. “Ayikho into engihlupha emoyeni njengokubona iqembu elikhulu kangaka nelithandwa uMzansi wonke, ikakhulukazi eKZN lidlala le phansi ehlathini (NFD). Ngizimisele ngokulwa ukuze sibuyele kwiPSL ngobe phela umlando uzohlala uthi uSuthu lwaya phansi kwiNFD luqeqeshwa yimina, yingakho ngithi ngifisa ukuzibona ngibuyisela lekilabhu lapho kufanele ibe khona,” kusho uBarker.
UBarker uthi unyaka ka2016 kufanele kube unyaka omuhle nowezinhlanhla eqenjini nasebalandelini baMaZulu.
Lomqeqeshi uze asho angananazi ukuthi leliqembu lingabuyela kwiPSL ngonyaka ozayo. “Angeke kube lula kodwa uma singalwa njengesosha elilwela izwe lalo futhi silwele ukufa nokuphila, leli qembu lingabuyela kwiPSL noma lishaye kwasani.”
Okwamanje leli qembu laseMdubane lisalele isikhombisa kwiligi. Usuthu seluqoqe amaphuzu awu 19 emva kwemidlalo eyishumi nantathu (13).
UBarker uthi amasosha akhe kuzofanele aqalaze ngokunye futhi atshengise ukuthi azimisele ukwenzani uma sebedlala neBaroka ngoMgqiibelo ( January 9) e-Old Peter Mokaba Stadium.